July Dream: Native Myanmar
Posted by JulyDream at 10:30 AM
nice ko July yay.
i admire for ur mental.
မောင်နှမတွေရယ်ကိုမြင်ယောင်လာမိပြီး နာကျည်းလာမိတယ်။ဇာတိမြေကိုချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ဒီနိုင်ငံသားအဖြစ်ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွား
ကျွန်တော်ရဲ့ ဇာတိမြေ မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခါအခွင့်သင့်ရင် သင့်သလို ပြန်လည် ပေးဆပ်ချင်မိနေပါတယ် ဆိုတာ ရင်ထဲက လာတဲ့ စကားလေးပါပဲဗျာ။
ညီလေးရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မြင်ရုံနဲ့ ရင်ထဲက လာမှန်း သေချာ ခံစား သိနိုင်ပါတယ် ... :)
တကယ့်ကို ပို့စ် ကောင်းတပုဒ်အဖြစ် ရေးပေးလိုက်တာကိုး။ ဒါ့ကြောင့် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျမလည်း မြန်မာလူမျိုး အစစ်မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရပ်မြေ ကိုယ့်ရဲ့ ဇာတိမြေကိုတော့ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ တင့်တယ်စေချင်တဲ့ စိတ်က အပြည့်ပါ။
ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ခံစားချက် အပြည့်နဲ့ ရေးလိုက်တော့ ဒီလို ပို့စ်လေး ဖြစ်သွားရတာပါ။ အခုလို အားပေးတဲ့ အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံက လွဲပြီး တခြားကမ္ဘာပေါ်မှာ
မတွေ့ နိုင်တဲ့ အရာတွေ အများ ကြီးပါ..
ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်း အပြင်.. လူတွေရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်း
သည်းခံ. ရောင့်ရဲ နိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေ ဟာ
တို့တွေ ဘယ်မှာမှ ရှာတွေ့ မှာ မဟုတ်ဖူး..